बिहिवार, मंसिर ५, २०७६ ०३:३१:४०
शनिवार, असार ७, २०७६ News Missile
मजदुर आन्दोलनको कारण देखाउदै पाँच तारे होटल (होटल ह्यात रिजेन्सी) तीन दिन बन्द भयो। चार दिनदेखि लगातार आन्दोलन गरेको कारण होटल बन्द गरिएको व्यवस्थापनको गुनासो थियो।
होटलमा आवद्ध कर्मचारीहरूले पहिले सम्झौता गरेअनुसारको आफ्नो सुविधा नपाएको, होटलको उच्च तहमा भारतीय नागरिक लिएको लगायतका कारणले आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको आवद्ध कर्मचारीको भनाइ छ।
यसरी होटलमा हड्ताल गर्नु र बन्द हुने स्थितिसम्म आउनुको कारणका विषयमा होटल ह्यात रिजेन्स मजदुर युनियन संघका अध्यक्ष मुक्ती दाहालसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी।
व्यवस्थापकलाई घुडा टेकाउन हेटल बन्द नै गराई छाड्नु भयो हैन ?
होटल बन्द भएको छैन सेवा काम गर्ने कर्मचारी नभएको कारणले गर्दा अहिले रोकिएको हो। यसमा मजदुरको आन्दोलन भन्दापनि सरकारसँगको टकराव हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ। राज्यले आफूले लगानी गरेको ४० प्रतिशत शेयर घटाएर नौ प्रतिशतमा मात्रै ल्याएको छ। यता जग्गाको हिनामिनाको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध समितिले छानविन गरेर कारवाहीको लागि निर्देशन दिएको छ त्यसपछि सरकारसँग जुध्न नसकेर मजदुरको बहाना गरेर बन्द गरिएको हो।
आन्दोलन त गरेको हो र त्यसैको असर हो नि त ?
हाम्रो धर्ना कार्यक्रम थियो। हाम्रो पूरानो सम्झौता कार्यान्वयन होस्। भारतीय उच्च तहका कर्मचारीले नेपाली श्रमिकमाथि जुन किसिमको शोषण गरेको छ। त्यसको अन्त्य होस् भन्ने विषयमा धर्ना कार्यक्रम बनाएको हो।
व्यवस्थापनले यसलाई निहुँ बनाएर यही बेला सरकारसँगको तुष मेटाउन सकिन्छ सरकारलाई कोही न कोही झुकाउन सकिन्छ भन्ने मनासाय पालेको देखिन्छ। बाघ आउनु र बाख्रो कराउनु भएको हो ?
बाघ कराउनु बाख्रा हराउनु पनि हैन कि खाली मजदुरलाई अगाडी देखाएको मात्रै हो।
यसमा मजदुरको विषयमा अत्यधिक राम्रो छ । काम गर्न अवरोध गर्ने हड्ताल गर्ने अनि हाम्रो कारण हैन भन्न मिल्छ र ?
काम गर्न गर्न अवरोध गरेको छैन खाली हाम्रा श्रमिकहरूले विगतदेखि पाइरहेको सेवा सुविधाहरू पाउनु पर्यो त्यसलाई कटौति गर्न पाइदैन मात्रै भनेको हो। साथै श्रम ऐन श्रम नियमावलीमा भएका विषयमा कार्यान्वयन गर्नु कुनै पनि संस्थाको दायित्त हुन्छ नै हामीले त्ही विषय स्मरण गराएका हौ। बाकी अन्य विषय केहेी छैन हामीले काम गर्न रोक्यौ गेष्टलाई रोक्यौ सुरक्षा दिन सकेन भन्ने जुन व्यवस्थापनको एउटा कपोलकल्पित भनाइ छ यो सरासर झुटो हो। यो सरकारलाई तुस फेर्ने रचिएको बाहाना बाहेक अरु केही हैन।
तपाईहरूको माग के के हुन् ?
हाम्रा धेरै माग छदै छैनन्। हामीले पूरानो हाम्रा खाइपाई आएको कुनैपनि सुविधा कटाउन पाइदैन भनेका हौ त्यो भन्दा बाकी खासै केही छैन। तर यहाँ सरकारले समिति बनाएर कारवाही सिफारिस गर्याे त्यसपछि यिनीहरूले योजना बुने। योजना के भयो भने केही चार र पाँच जना भारतीय नागरिकलाई उच्च व्यवस्थापनमा ल्यायो। ती नागरिक ल्याइसकेपछ यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई क्रमिक रुपमा श्रम शोषण गर्न थाले दुरव्यवहहार अभद्र व्यवहार गर्न थाले। यसैको परिणाम पनि हो।
कानूनी उपचार पनि त हुन सक्थ्यो होला नी ?
हामीले कानूनी उपचार पनि गरेको हो। हामीले श्रम कार्यालयमा निवेदन दिइसकेको हो। त्यहाँ छलफल बोलाउदा व्यवस्थापन पक्ष छलफलमा उपस्थित भएन श्रम अदालतबाट मुद्दा जितेर आएका छौ। त्यो पनि कार्यान्वयन भएको छैन। हामीले कानूनी बाटो पनि अवलम्वन गरिसक्यौ यो कानूनी बाटो अवलम्वन गर्दा पनि नभएर अन्तिम बिकल्प खोजेका हौँ।
होटलमा धर्ना बस्न मिल्छ र ?
यो नारा जुलस भनेर नारा जुलस गरको छैन शान्तिपूर्ण धर्ना बस्न संविधानप्रद अधिकार हो हामीले त्यही गरेको हौ।